You are here: Home somal WARBIXIN: Waa Kuwee Sideeda Kooxood Ee Iskugu Soo Hadhay Tartanka Koobka African Nations Cup Uk? Goorma Ayaase La Ciyaari Doonaa Kulamada Sideed Dhamaadka Tartankan?
Haddaba waxaa la soo gabagbeeyay heerka group-yada iyada oo 8 kooxood oo ka mid ah 20 kii kooxood ee koobkan ku tartamayay ay hadda iskugu soo hadheen sideed dhamaadka koobka African Nations Cup Uke e 2015 ka.Group kasta waxaa ka soo baxayay labada koxood ee helay dhibacaha ugu sareeya halka Group kasta ay ka hadhayeen saddexda kooxood ee dhibcaha ugu hooseeya helaa.
Waxyaabaha layaabka ah ee tartankani intii uu socday ka dhacay ayay ka mid tahay in kooxdii koobkan difaacanaysay ee Sierra Leone ay ku hadhay heerka Group-yada waxaana sidoo kale tartankan heerka group-yada ku hadhay kooxda saddexda jeer ku guulaystay ee xulka qaranka Nigeria.
Waxa kale oo waxyaabihii indhaha soo jiitay ka mid ahaa in kooxda xulka qaranka Somaliland oo markii ugu horaysay koobkan ka soo qayb gashay ay wacdaro ka dhigay isla markaana ay ka mid noqotay sideeda kooxood ee iskugu soo hadhay quarter finalka koobka African Nations Cup UK.
Iyada oo koox kastaaba ciyaaraysay afar kulan ayaa koox kasta oo group keeda ka soo baxaysa laga doonayay inay ugu yaraan hesho dhibcaha labaad ee ugu badan waxayna Somaliland guulaysatay saddex kulan iyada oo 9 dhibcood ka urursatay halka ay hal kulan guuldaraysatay waxayna sidaa kaga mid noqotay sideeda kooxood ee wareega sideed dhamaadka u soo gudbay.
Somaliland ayaa ku jirtay Group B oo ay kuwada jireen afarta xulka qaran ee Nigeria, Rwanda, Kenya iyo Burundi. Somaliland ayaa kulankii ugu horeeyay guul ka gaadhay Nigeria oo ay 1:0 ku garaacday, waxayna sidoo kale 1:0 ku muquunisay xulka qaranka Kenya haka ay 4:0 ugu awood sheegtay xulka qaranka Rwanda, laakiin Somaliland ayaa guuldaradii kowaad kala kulantay kooxda xulka qaranka Burundi oo ay groupka B ka soo wada baxeen.
Haddaba waa kuwee sideeda kooxood ee ku tartami doona sideed dhamaadka African Nations Cupku? Goorma ayaase la ciyaari doonaa kulamada sideed dhamaadka koobkan?.
Kulamada sideed dhamaadka African Nations Cup UK ayaa la ciyaari doonaa maalinta sabtida ah ee 6da bisha June waxayna kulamadani ka dhici doonaan West Ham Memorial Grounds. Waxayna Quarter finalka iskugu soo hadhay Somaliland, Uganda, Burundi, Cameroon, Ghana, Ivory Coast, Morocco iyo Senegal.